AS ROMA VS FIORENTINA: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan! – Gool FM
Raage April 7, 2018
(Roma) 07 Abriil 2018 – Waxaa caawa fiidkii gegada Stadio Olympico ee caasimadda Roma isku fara saaraya labada kooxood ee AS Roma vs Fiorentina oo dheelaya kulanka 2-aad ee ugu culus todobaadka 31-aad ee horyaalka Talyaaniga.
Dhanka Roma: Waxaan weli soo kabanin Ünder halka Nainggolan loo yeerey, balse uu kaydka kusoo bilaaban karo. Macallin Di Francesco ayaan nasin doonin Gerson iyo Gonalons oo khadka dhexe qaban doona isla daqiiqada 1-aad. Waxaan loo yeerin garab-weerarka Perotti.
Dhanka Viola: Badelj ayaa kulankan kaga maqan dhaawac jilibka ah, waxaana maqnaanshaha ku wehlinaya Thereau, waxaa sidoo kale ganaax ku maqan Chiesa. Gil Dias ayaa bilowgaba safan doona, iyadoo laacibiinta loo yeerey uu ka mid yahay muluqa Sottil.
28 SKORUPSKI, 18 LOBONT, 3 LUCA PELLEGRINI, 44 MANOLAS, 25 BRUNO PERES, 33 J. SILVA, 16 DE ROSSI, 4 NAINGGOLAN, 13 CAPRADOSSI, 6 STROOTMAN, 14 SCHICK
97 DRAGOWSKI, 22 CEROFOLINI, 2 LAURINI, 51 PETKO, 15 OLIVERA, 76 BRUNO GASPAR, 10 EYSSERIC, 19 CRISTOFORO, 27 LO FASO, 11 FALCINELLI, 21 SOTTIL
Ünder, Karsdorp, Perotti
Barcelona oo u sheegtay Arsenal in Ousmane Dembele .......